Echiche Ụgha nke Persephone: Nchịkọta dị mkpirikpi - UniProyecta
Akụkọ ifo ndị Gris juputara na mkpụrụedemede mara mma nke na -akwụsịghị ịtụ anyị n'anya. Otu n'ime ha bụ Nwa agbọghọ mara mma Persephone, onye bụbu eze nwanyị nke ahịhịa ma mesịa bụrụ chi nwanyị Hedis. O siri ike ịmata na ụtọ ya na ịdị ọcha ya ghọrọ ikpe kacha njọ.
Taa a chọrọ m ịkọrọ gị akụkọ nwa okorobịa a nke nwa Zeus. Ị ga -enwe ańụrị ịmara ndụ ya ma n'ụwa ma n'ime ime mmụọ. Aga m agwa gị gbasara mmalite ya, ụdị ndụ ya dị na ihe ọ bụ mmekọrịta ya na oge nke afọ. Ị ga -ahụ na ịhụ njem a ga -amasị gị.
1 Mmalite nke Persephone
2 Hedis tọọrọ Persephone
3 Persephone laghachiri n'ụwa
Mmalite nke Persephone
Dị ka akụkọ si kwuo, nwa agbọghọ a ọ bụ nwa Zeus, chi nke Olympia chi na eze nke mmadụ n'ụwa. Demeter, nne yaỌ bụ chi ala, ọ na -achị ọrụ ugbo, ọ bụ ya na -ahụ maka ọmụmụ na ichekwa ụdị ihe ọkụkụ na ihe ọkụkụ ha niile. Nokwarem no, ɔbarima ne ɔbea ntam dɔ ho hia; Zeus na Hare bi na Olympus, ebe Demeter na nwa ya nwanyị bi n'ụwa.
Nne na nwa nwanyị mere ndị otu zuru oke iji kwado nkwekọ ndụ ndụ na mbara ala. Nne mere ka mkpụrụ nke ụwa puo, nwa ya nwanyị, Persephone, na -ahụ maka idobe nguzozi na osisi. Ọnụnọ ya na -akwado ahịhịa niile ma mee ka ubi na -ama pokopoko.
Ha biri ndụ dị nwayọ ma na -adọrọ mmasị, mgbe ahụ, ha na -ahụ maka inye ndụ osisi, nke dị anya site na Olympus na chi ya niile. Ruo otu ụbọchị ilu, ihe niile gbanwere n'etiti ha, ụbọchị kachasị njọ na ndụ Persephone. Kemgbe ahụ, ekewara ịdị adị ya n'etiti ụwa nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na ọdịdị abụghị otu ihe ahụ ọzọ. Kedu ihe mere n'ọnọdụ a?
Hedis tọọrọ Persephone
Persephone na nne ya na -ejegharị na okike iji nwee ekele maka ọrụ nke njimara ya. Ha na ha nwere nnukwu obi ụtọ ma kpalie ha ịga n'ihu na -ekepụta ahịhịa, juputara n'ọchịchọ maka abamuru nke ndị niile bi n'ụwa. Ha na -awagharị n'ọhịa mgbe niile, iyi na ubi.
Ụbọchị anwụ na -acha dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, Persephone na -aga ije ya na nne ya na ụfọdụ ndị enyi nymph na -eso ha mgbe niile. N'etiti ubi okooko osisi ka nwa agbọghọ na -atọ ụtọ, na -eso ndị enyi ya na -atụgharị uche n'ịdị mma dị iche iche, agbanyeghị, nne ya kewapụrụ onwe ya ịga leta mpaghara ndị ọzọ.
Obere nkewa a n'etiti nne na nwa nwanyị furu ha nnukwu ihe, ebe ọ bụ na mmadụ na -elebara ya anya nke ukwuu wee na -eche naanị obere akpachapụghị anya ka ọ dọpụta ya ma kuru ya n'ike. Onye omekome a abụghị onye ọzọ Hedis, chi nke hel.
Omume gbara ọchịchịrị na -eche ya nche, na -agha n'ime obi ya agụụ miri emi ka ya na ihe okike a dị ọcha nọrọ. Ọ na-enwu enwu, na-enwe ọ, ụ, na-enye ndụ. Ọ bụ onye na -amụghị nwa, onye hụrụ ọchịchịrị na ọnwụ n'anya. Kedu onye ga -ekwenye na agwa abụọ a ga -ejikọ ọnụ? Echiche ya na -amanyewanye ike ruo mgbe o kwere ka ọchịchọ ya dị ala, buru ụgbọ ala ya wee hapụ ala mmụọ ịchọ nwa agbọghọ ahụ.
Echiche ya maka Persephone dugara ya ka ọ tọọrọ ya ma kpọga ya na hel. Ndị enyi nymph ya enweghị ike inyere ya aka. Mgbe onye ọ bụla ghọtara ihe merenụ, e nyere ha ntaramahụhụ maka nleghara anya, ebe nne ya na -enweghị mgbaghara gara n'ihu na -achọsi ya ike na -enweghị azịza, n'ihi na ọ maghị ihe na -eme, ọ maghịkwa ebe ọ nọ.
Helios, chi anyanwụ, ihe mgbu ya kpaliri ya, ọ kọwaara ya eziokwu banyere ịtọrọ mmadụ. Ọ bụ mgbe iwe were ya, nke juputara na mwute na enweghị enyemaka, kpebiri ịga n'otu ala mmụọ ịchọ nwa ya nwanyị, hapụ ubi ndị a gbahapụrụ agbahapụ. Ndị a kwụsịrị ito eto, osimiri kpọrọ nkụ site na mmalite ha, ikuku anaghị efekwa ọzọ na ọdịdị nwụrụ n'okpuru nlebara anya nke ndị niile bi na ya.
Demeter chere na Zeus nwere mmekorita na ihe mere na ọ ga -etinye aka n'okwu ahụ. Zeus na -agwa Hades ka ya na nne ya laghachi na PersephoneAgbanyeghị, Hedis jụrụ arịrịọ ya n'ihi na adaeze na -emeghị ihe ọjọọ alaghachighị azụ. Ọ ga -ebi na hel ruo mgbe ebighi ebi. Naanị ihe Zeus nwere ike nweta bụ ka ya na ya kparịta ụka ga -adị n'etiti ụwa abụọ, ọnwa ole na ole n'ụwa na ndị ọzọ so ya nọrọ ebe ahụ, Hedis kwetara.
Persephone laghachiri n'ụwa
Tọrọ atọ na enweghị ụzọ mgbapụ, ogbenye Persephone ga -ekerịta ndụ ochie ya nke obi ụtọ na ọ joyụ na ịbụ eze nwanyị nke ala mmụọ, ha abụọ na -emegiderịta onwe ha. Ya na Hedis nwere ngalaba ndị nwụrụ anwụ na -egbochi ha ịgagharị n'ókèala ndị ọzọ. Onye ọzọ na nne ya ebe ọ na -agba egwu, na -achị ọchị, na -abụ abụ ma na -enye ndụ n'ubi ifuru na -enweghị nsọtụ.
N'ụzọ dị otu a ọ gara n'ihu ịdị n'etiti ndụ na ọnwụ. Ndị mmadụ na -ekwu nke ahụ nwere ụmụ nwanyị abụọ nke Hedis: Makaria, Chineke nke Ọnwụ; na Melinoe, chi nwanyị nke mmụọ. Ndị Gris na -ekwukwa na Orpheus nyeere aka nwetaghachi nwunye ya nwụrụ anwụ, n'agbanyeghị na mmejọ mebiri ike ya.
Ihe eserese a na -egosi adịghị ike nke aka ya dị ọcha yana mkpa ọ dị ichebe onwe gị pụọ n'aka ndị obi ọjọọ. Dị ka Hedis, enwere ọtụtụ na Persephone nwere ike ịbụ adaeze ọ bụla na -emeghị ihe ọjọọ. Ndụ nke ndị a Ụmụ agwa Olympus ọ bụ ngosipụta doro anya nke eziokwu dị adị n'etiti mmadụ.
Akụkọ ifo nke Prometheus na Pandora
Inicio » omenala » Akụkọ ifo ndị Gris » Akụkọ ifo nke Persephone